PCT Drugs ntụ ntụ usoro suppliers - AASraw ntụ ntụ
/ ngwaahịa / PCT Drugs
Anyị bụ PCT Drugs powder suppliers, PCT Drugs ntụ ntụ maka ire ere, Dịka anyị kwere nkwa, niile PCT Drugs ntụ ntụ na-adị ọcha na-erughị 98%.
PCT ọgwụ ntụ ntụ
PCT ọgwụ ntụchi pụtara ọgwụ maka usoro ọgwụgwọ. Usoro ọgwụgwọ ọkpụkpụ bụ usoro eji eji ọgwụ ọjọọ eme ihe nke na-arụ ọrụ site na usoro dịgasị iche iche iji gbalịsie ike ịmezi ma weghachite hormones nke onye ọrụ na nkịtị mgbe a kwụsịla usoro steroid nke anabolic andbolic na-akwụsị.
Ozugbo onye ọrụ kwụsịla iji ọgwụ ndị na-emepụta anabolic androgenic, a na-ahapụ ha na ọnọdụ ebe a na-emepụta mmepụta nke testosterone ha, mgbe ufodu, ọ dị njọ. Ọzọkwa, ogo nke ndị steroid na-ebelata ruo mgbe ebighi ebi na usoro ha, na-ahapụ onye ọrụ na ọnọdụ nchịkwa catabolic, nke nwere ike igosi na ha nwere ike ịnọgide na-enwe nkwonkwo muscle n'oge na-eto eto. N'iburu nke a n'uche, ọ dị mfe ikwubi na anyị ga-achọ ịchọta ụzọ iji weghachite mmepụta nke testosterone nke ọma iji mee ka ọnọdụ dị mma maka ahụike zuru ezu na ịnọgide na-enwe ahụ ike.
A na-etinye clomiphene citrate (clomid ntụ ntụ) na tamoxifen (nolvadex ntụ ntụ) iji gbanwee usoro mmepụta nke testosterone. Ebe ọ bụ na ha abụọ nwere ike igbochi estrogen na hypothalamus na pituitary, si otú ahụ kwusi mmechi nkwụsị na-ezighị ezi, anyị nwere ọgwụ ọjọọ nke nwere ike ịbawanye FSH (hormone na-akpali akpali) na LH (luteinizing hormone) n'ime ahụ nwoke. LH nwere ike inyere aka mee ka mkpụrụ ndụ Leydig dịrị na testes iji mepụta ọtụtụ testosterone.
Ọtụtụ ndị na-ahụ na iji nolvadex ntụ ntụ na-arụ ọrụ nke ọma iji weghachi site na usoro ha. Otú ọ dị, ụfọdụ na-ahọrọ iji ọgwụ ọjọọ eme ihe iji kpuchie akụkụ nile. Okwesiri iburu n'uche na onye nolvadex bueder nwere otutu ihe na-akpali akpali nke LH, na milligram ka odi na milligram, ma e jiri ya tụnyere nke uzo clomid. Ọzọkwa, ọtụtụ ndị na-eme mkpesa na-eme mkpesa banyere mmetụta ndị sitere na clomid ntụ ntụ dị ka ọdịdị anya na ngbanwe ọnọdụ.
Usoro iwu PCT
Ntughari nke nolvadex maka usoro PCT:
Ụbọchị 1 100mg
Na-eso 10 ụbọchị 60mg
Na-eso 10 ụbọchị 40mg
Ihe dị n'elu bụ protocol nke nwere ike iji rụọ ọrụ. O doro anya na okirikiri na ihe ndị ọzọ nwere ike gbanwee dosages na oge nke usoro mgbakọ gị.
Dịka e kwuru n'elu, ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ iji ma ọ bụ nolvadex na clomid ntụ ntụ na-ekpuchi ikuku iji kpuchie akụkụ niile.
Ngwunye nke nolvadex ntụ ntụ na clomid ntụ ntụ jikọtara maka usoro PCT:
Ụbọchị 1 Clomid ntụ ntụ 250mg + Nolvadex ntụ ntụ 60mg
Ịgbaso 10 ụbọchị Clomid ntụ ntụ 100mg + Nolvadex ntụ ntụ 40mg
Ịgbaso 10 ụbọchị Clomid ntụ ntụ 50mg + Nolvadex ntụ ntụ 20mg
Usoro a kwesịrị igosi irè. Nke ahụ kwuru, dịka na nolvadex ntụ ntụ bụ naanị usoro nkwekọrịta, ọ bụghị na nkume. Mgbochi mgbagwoju anya nwere ike ịchọ nrịta dị elu ma ọ bụ ogologo oge iji mepụta mmetụta ndị a chọrọ.
Mgbe ị na-amalite usoro PCT ga-adabere na ogige ndị a na-achịkwa n'usoro. Chọpụta ihe niile steroid ị ji n'oge gị nọ na tebụl anyị dị n'okpuru, ma rịba ọgwụ nke nwere ụbọchị mbido kachasị dị ogologo mgbe ịbanye ikpeazụ. Nke a bụ ka anyị ghara ịmalite usoro PCT mgbe enwere ike inwe nnukwu androgens na usoro ahụ, nke ga-eme PCT ka ọ bụrụ mkpọmkpọ ebe ruo mgbe ọkwa ahụ dara.
Ihe mere Bodybuilders Ji eji uzuzu kpuchie
Okpokoro uzuzu bu aha aha nke Clomiphene Citrate ma bu estrogen synthetic. A na-ede ya ọgwụ iji nyere aka ịzụ ụmụ na ụmụ nwanyị ọmụmụ. Aha ọzọ aha ya bụ Serophene.
Ihe ka ọtụtụ n'ụbụrụ nke anabolic, karịsịa ndị androgens, na-egbochi mmepụta nke testosterone ahụ. Ọ bụrụ na onye na-emerụ ahụ na-abịa na steroid, mmepụta nke testosterone bụ efu na ọkwa nke steroid ndị a na-agbanye n'ọbara na-ebelata. Nke a na-ebute oke nke catabolic: hormones anabolic na ọbara elu, ya mere ozu ahụ nọ n'ọnọdụ catabolism, na, n'ihi ya, ọtụtụ n'ime anụ ahụ e nwetara na oge ahụ ga-efu.
AASraw na-enye ụdị ụdị ntụ ntụ nke PCT ọgwụ, Tamoxifen Citrate / Nolvadex, Clomiphene citrate / Clomid powder, Exemestane / Aromasin, Fluoxymesterone / Halotestin, Anastrozole / Arimidex na Letrozole / Femara. Ị nabatara ihe ndị ahụ sitere na AASraw iji kpuchie ahụ ike gị.
Ọpụpụ (Aromasin) ntụ ntụ